Nagu saabsan | NINGBO SURE PAPER CO., LTD
Ningbo hubi Paper Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2011, inta badan ku hawlan iibinta gudaha iyo dibedda ee warqadda darajada cuntada, warqad dahaarka leh, warqadda koobka, kaarka fool -maroodiga, warqad macdan ah, warqadda dhejiska. Waqtigan xaadirka ah, waxaannu la samaynay xidhiidh iskaashi oo muddo dheer ah in ka badan 1,000 shirkadood oo wax daabacda oo adduunka ah.
waxaan haysannaa kayd joogto ah oo ah 8,000 oo tan bishii, iyo 18 mashiin oo lagama maarmaan ah sida mashiinka goynta, mashiinka kala-goynta iyo mashiinka qurxinta, mashiinka xirxirida kuleylka, mashiinka xirxirida otomatiga ah.
Markaa waxay la macno tahay inaan dalabkaaga ku gaarsiin karno waqti aad u gaaban si aan u buuxino shuruudahaaga, waxaanan kuu samayn karnaa dhammaan waraaqaha cabbirka ee la habeeyay. waxaa jira warshad yar oo kuu samayn karta suuqa.
1: Waxaan awood u leenahay inaan ku buuxino dhammaan shuruudahaaga cabbirro kala duwan iyo culeys waqti ku habboon warqad ahaan.
2: taariikhda gaaban ee gaarsiinta.
3: Haddii aad u baahan tahay adeegga kale ee waraaqaha ah, sida daabacaadda, ka dhig badeecadaha dhammaaday ... qiimo
4: Haddii aad u baahan tahay warqadda “APP” ama “Chenming”, waxaan kuugu iibin karnaa qiimo aad u wanaagsan, maxaa yeelay waad ogtahay, warshaddan waraaqaha ah inaysan si toos ah ganacsi ula yeelan macaamiisha ugu dambeysa, waxay noo iibiyaan warqad- hay'ad (waa inaan ka iibsannaa in ka badan 1500 tan bishii si aan u hayno xaaladda wakaaladda).
5: Waxa aan mar walba isku dayno inaan sameyno ayaa kaa caawineysa inaad isticmaasho lacag yar si aad u hesho warqad tayo leh oo la mid ah marka la barbar dhigo suuqa xaafaddaada.
6: Waxaan ku haysannaa suuqa warqadda qaali hodan ah, iyo inta badan waraaqaha dibedda ayaa iyaguna ka yimid suuqa Shiinaha, waxaan kuu soo bandhigi karnaa wararka ugu cusub ee warqad.
Aynu noqonno lamaanahaaga ugu daacadsan oo kaa caawiya inaad xalliso dhammaan dhibaatooyinka jidka.
(1) Tayada sare, heerka caalamiga ah, ISO AND FSC ect certificate;
(2) Khibrad hodan ku ah ganacsiga caalamiga ah ee waraaqaha;
(3) OEM la aqbali karo; sagxadda mashiinka waraaqda dabacsan, cabbir kasta waa la soo saari karaa;
(4) Adeegayaga VIP -da caalamiga ah ee TOP;
(5) Oraah degdeg ah oo sax ah;